Ugu yaraan sagaal qof oo ku dhaawacantay weerar ka dhacay jaamacada gobolka Ohio ee Mareykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldUgu yaraan sagaal qof oo ku dhaawacantay weerar ka dhacay jaamacada gobolka Ohio ee Mareykanka
November 28, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ugu yaraan sagaal qof oo ku dhaawacantay weerar ka dhacay jaamacada gobolka Ohio ee Mareykanka. [Sawirka: Twitter]
Ohio-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay Jaamacada gobolka Ohio kaasoo ay qaadeen labo qof maanta oo Isniin ah, sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka.
Warbaahinta maxaliga ah ayaa kusoo waramay in dadka ay ku dhaawacmeen toogasho iyo toorayeyn.
Sagaalkii qof ee dhaawacantay ayaa loo qaaday isbitaalada maxaliga ah, hal qof ayaa ku sugan xaalad daran kuwo kalena xaaladoodu waa wanaagsantahay, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka.
Maamulka jaamacada ayaa ardayda ka codsatay in ay joogaan fasaladooda gudahooda.
Ciidamada ammaanka ayaa ku hareeraysan dhismaha jaamacada.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas ilaa iyo hadda.